Caalamka Online » LA OGAAADAY: Awooda Faeagalinta Imaaraatka ee aan ka gambashada lahayn oo la ogaaday halka ay ka timid
LA OGAAADAY: Awooda Faeagalinta Imaaraatka ee aan ka gambashada lahayn oo la ogaaday halka ay ka timid
Imaaraadka Carabta ayaa Soomaaliya ka haysta heshiis u saamaxaya waxyaabo badan oo danahooda Soomaaliya ku saabsan, sida ay ogaatay Warbaahinta xilli Imaaraadka ay dagaal xooggan ku hayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Heshiiskan ayaa horey ugu saamaxay Imaaraadka inay la wareegaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso, hase yeeshee cabsida ugu xooggan ayaa ah in ay jiraan waxyaabo kale oo Imaaraadka loo saxiixay oo dadka Soomaalida aysan ka war­hayn.
Diblomaasiyiin ku sugan Muqdisho iyo Nairobi oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in inkasta oo Imaaraadka ay heshiisyo la kala saxiixdeen Somaliland iyo Puntland, si ay ula wareegaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso, iyo saldhigga Berbera, haddana uu jiro heshiis kale oo ay la galeen dowladdii hore ee Soomaaliya.
“Imaaraadka waxay u sheegeen beesha caalamka inay heshiis ka haystaan madaxda dowladdii hore ee Soomaaliya” Waxaa sidaas yiri diblomaasi la hadlay Warbaahinta oo codsaday inaan la magacaabin.
“Ujeeddada ugu weyn ee Imaaraadka ayaa ah, in haddii dowladda Soomaaliya ay isku daydo inay Imaaraadka ku dacweyso maxkamad caalami ah, si lama filaan ah ay ula soo baxaan heshiiskan, taasi oo ceeb iyo guul­darro ku noqon karta dowladda Soomaaliya” ayuu yiri diblomaasi la hadlay Warbaahinta.